PressReader - Zululand Eyethu: 2017-11-23 - Se­siku­lun­gele ukusebenza isi­tolokazi saseShowe
Se­siku­lun­gele ukusebenza isi­tolokazi saseShowe
ISITOLO sokudla okusha, i-Cambridge Foods, ses­ima­gange ngoku­vula igat­sha laso leshumi ne­sishiya­ga­lom­bili eKZN, njen­goba lesi sitolo sizovulwa en­daweni yaseShowe. Lesi sitolo esakhelwe ngasemzileni we­sitimela, sithem­bisa ukuh­linzeka umphakathi ngez­into eziningi ozidin­gayo. Njen­goba siqale ngo1990, uku­vula lapha es­i­fun­dazweni, ngez­i­tolo eziy­isithupha ezi­day­isa ngenyama entsha, lesi sitolokazi namh­lanje, sina­m­a­gat­sha anga­mashumi am­athathu ez­i­fun­dazweni ez­inhlanu. U-Cambridge Food kungaba yisi­tolo es­i­day­isa ukudla okusha, kodwa se­be­chithe iminyaka bakha isisekelo seb­hizin­isi labo lentengo en­gehlulwa, ku­makhasi­mende abo.
Njen­gengx­enye yenkam­pani i-Mass­mart Group, futhi manje esiy­ingx­enye ye-Wal­mart, okuy­inhlangano yam­ab­hizin­isi yomh­laba, u-Cambridge Food, usiza ngisho amakhasi­mende amaningi ukonga imali, ez­in­tweni azidin­gayo ukuze aphile kahle zonke izin­suku.
Enhliziy­weni yalelib­hizin­isi, kukhona isi­bopho sokuh­linzeka amakhasi­mende nga­lokho ok­u­fanele imali yawo ekudleni okusha.Iminyango yethu eyakha lesi sitolo ih­langan­isa, ib­husha, aba­thenga ukudla okuphekiwe, yib­hika­wozi kanye nen­dawo yokosa in­yama ebizwa ngeshisa nyama.Ngaphezu kwalokho, kukhona nezith­elo ne­mifino okusha okusuke kulinyiwe, ngakho ke u-Cambridge un­akho konke okudingekayo es­i­tolokazi saba­thengi.
Lesi sitolokazi si­day­isa imikhiqizo es­izin­geni eliphezulu enhlobonhlobo kanye nez­im­pahla ezithathwe, zafakwa ngaphansi kwe­sam­bulela sabo kuyo yonke imikhakha. Noma ngabe ukudla okomile, ukudla okusha, imikhiqizo yasekhaya noma imikhiqizo yobuhle, isitolo u-Cambridge sihlose uku­nikeza amakhasi­mende okuthe xaxa nge­mali yawo kuzo zonke iz­into azithen­gayo.
New eShowe su­per­mar­ket ready to roll